Dhugaa Dhoksuun Mul’ata Hin Mirkaneesu! – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooDhugaa Dhoksuun Mul’ata Hin Mirkaneesu!
Damee Boruutin, Caamsaa 25, 2018
Mumicha Ministraa Itoopiyaa kan ture Malasaa Zeenawii caalaa kan nama isa dura dhaabbatu xiqqeessuu fi salphisuuf afaan bal’aa qabu jira natti hin fakkaatu ture. Karaa biraa Malasaan haala isa fuula dura jiru fageesse hubachuuf nama dandeettii qabu akka tahe haaluun dhugaa irraa nama fageessa. Utuu nama waan fagootti hubachuu danda’u hin taanee ilmaan Oromoo har’a qabsoo Uummatni Oromoo dhiiga isaan asiin gahe kana akka corofee ykn culullee irraa butanii gara dabarsuuf warra fardaan kaataa jiran kana harma hoosisee hin guddifatu.
Kara biraa mee jecha Malasaa Zeenawwii kana haa ilaallu. “ Uummatni Oromoo na gahe jedhee yoo didee ka’e hunduu ni raawwata. Uummata Oromoo Waraana Itoophiyaa miti yoo kan Afrikaa hunduu wal gahe dhaabuu hin danda’u. Diraaman kamuu yoo hojjetame gargaarumaa fiduu hin danda’u”. Hiikaan isaa kan koo ti. Malasaan nama dhugaa hubate dubachuuf sodaa hin qabne dha. Har’a haalli kun Oromiyaa guutuu keessatti tahaa hin jiruu? Akkuma Malasaa kana dhugaa jiru hubatnii akkaataa itti rakkoon siyaasaa hundee qabu hiika argatu irratti hojjechuun hafee diraaman OPDO fi TPLF nageenya uummataa fi qabeenya biyyaa irratti gaaga’ama hin yaadamne fiduuf deema. Itti gaafatama guddaa har’a harka irratti baatanii figaa jiran boru mataa isaanii irra tuulamee karaa socha’an akka dhabsiisuu danda’u jecha Malasaa irra barrachuu qabu
Haayile Maariyaam Dasaaleeyni fudhatama haa dhabu malee harka isaa facaasuun Malasaa fakkaachuuf yaalaa ture. Kononol Abiyi dargagoota isa duraa dhaabbatanii gaaffii qajeelaa gaafatan barumsa gahaa hin qabdan jedhee xiqqeessu fi salphisuuf yaaduun muxxannoo abbaa harmaa isaa Malasaa irraa argateen dhima bahuu isaa ti. Namni diploomaa EPRDF isaa baajetni mootummaa irraa baheef utuu guyyaa tokko mana barumsaa hin dhaqiin sadii afur bitatee gorroo irra fanifatee jiru barumsa yoo jenne maqaa barumsaatu xurreessuu taha.
Barumasa keessatti sadarkaa olaanaa kan tahe dipolooma dookteruma kan tahe namni argatu baratee, qoratee (research), barreessee, yoo waan barreesse sanaaf koreen acadamikii hojii isaa kana qoratee isaaf mirkaneesse duwwaa dha. Waa’ee barumsa Kononel Abiyi waan dhageenye hin qabnu. Garuu dooktera tahuu kan danda’ee namoota Isilaamaa fi kiristaanaa naannoo inni dhalatetti wal lolan araarsuun jedhama. Akka anaaf galutti kan inni barreesse gabaasa malee xumura barumsa dooketrumaa miti. Mee maaloo kitaaba meeqa dubbisee laataa waa’ee naannoo itti dhalatee sana qorachuuf? Yoo jiraatee warri kitaaba inni dubbisaa bahee agartan nuuf dabrsa. Inni deemee odeessuu fi hocuu jijjirachuuf iyyuu yaroo hin qabu. Ilmaan Oromoo rifachiisee qabsoo kana keessaa akka bahan dhiibuuf tattaaffiin godhu kun isaa hin baasu. Asuma irratti dhaabbee waan danda’e akka amantaa fi hawwii isaa karaa barbaaduun hojii isaa gageessuun mirga isa ti.
Sagaagalummaa siyaasaa mootota Habshaa irraa dhalan utuu gara Uummata Oromo fiduu baatanii bareedaa dha. Kootii sagal uffatnii fi waan sagal xibaaruun beekaa fi waan uummataaf dhaabbatan nama hin godhu. Bakkaa irraa bakkatti jooruu fi hocuu jijjiruun jijjiraa uummatni Impaayeera Ioopiyaa, keessattu Uummatni Oromoo irraa eegachaa jiru wajjin wal hin argu. Kan waan arge fakkaachuuf bifa jijjiratu gaarrerraa dhuwwaa dha. Waan haaraa uummataaf geessan hin jiru. Bakka deeman mara dura dabarsanii dabbaleewwan heddumnaan erguu fi miseensota OPDO naannoo sanaa walitti qabanii waan uummatni bal’aan isaan ammate fakkeessuuf kufanii ka’aa akka jiran jiraatonni Dambi Doolloo midiyaa adda addaaf ibsan irraa dhageenyee jira . Uummata dhiiga isaa dhangalaasee aangoo kanaaf isaan gahetti galagalanii bulgaafachuun bareedaa miti.
Kononel Abiyi biyya ollaa irra naanna’e namoota Itoophiyaa hidhaman nu hiikaa jedhee akka ajjamaa godhu hunduu argaa jira. Ammaa Uummatni Oromoo jilbeefatuutti akka Labsiin Yaroo Hattamaa irraa hin kaafne ifa gochaa jira. Uummatni Oromoo isaaf miti abbaa harmaa isaa Malasaafuu hin jilbeefanne. Utuu karaa jooruu fi amma uummatni Oromoo jilbeefatuu eeguu biyya Impaayeera Itoophiyaa iyyuu akka biyyaatee hiyoomsee (bankrupt) godhee biyyumaan ishee hin raawwatne yaaduu fi yaadahuu qaba.
Uummata Oromoo haa jibbu. Garuu namni hidhame hundi haqni isaa waan sarbamee jiruuf saba isa kam keessaa iyyuu haa dhalatuu heeraa fi seera tokkoon ilaalamuu qaba. Maaliif ilmaan Oromoo hin hiikaman mootummaan kunoo afaniin illee taatu akka Obbo Lammaan jedhu Uummatni Oromootu isaan wajjin ciniisifatee argamsiise. Keessattu angafti qabsoo bilisummaa Ooromoo Nadhii Gamadaa bakki jiru utuu oollee hin bullee Uummatni Oromoo beekuu qaba.
Dhugaa jiru dhoksuun Mul’ata Kononel Abiyi Mirkaneessuuf hin jiru. Kononel Abiyi karaa tokkoon akka Mootii tahuu mul’atan qaba jechaa karaa biraa warra ilmaan Oromoo fixxee fi ficicisee wal itti funaanuudhaan qabsoo bilisummaa Oromoo irratti shiraa fi hammeenyaa hiriyyaa hin qabne xaxxaa jira. Jaarraa kudha tokkoffaa keessa afuura sobaan nama bayyee gowwomsuun rakkisaa dha. Keessattu dhalootni har’a jiru kun haalan dhammaqaa waan taheef waa’ee mul’ata isaa kana irra hin keewwatu. Haala qabatamaan lafa irratti hojjetamutu isaa fudhatama.
Namni saree buculaa fudhatee yoo guddifate amma lubbuun jiraattu warra ishee guddifatee dutti malee warra ishee horeef miti. Kanaafu waan nama dinqu hin jiru. Warri TPLF guddifatee amma lubbuun jiran TPLF tajaajjilu malee Uummata Oromoo keessaa dhalatan miti. Uummatni Oromoo qabsoo keenya irree tokkichaan bifa barbaachisaa taheen itti mudduu qabna. Dhihu fi baruu dhaadannoon keenya:
Hidhamtoonni keenya akka hiikaman warra achi buuteen isaa hin beekamnes Goota Oromoo Nadhi Gammadaa irraa eegale.
Labsiin Yaroo Muddamaa hattattaaan nu irraa haa ka’u.
Hidhaa fi ajjechaan ilmaan Oromoo haa dhaabatu.
Duulli hidhatoota Afar, Somalee warri hafan TPLF iin qinda’ee Uummata Oromoo irratti bobaafame hattattamaan haa dhaabbatu.
Saaminsii qabeenya Oromiyaa fi lafa Oromoo haa dhaabbatu.
Uummatni keenya qe’ee isaa irraa buqqa’ee rakkinaaf saaxilame gargaarsi gahaan haa godhamuuf
Yaroo uummatni keenya qe’ee isaa irraa buqqa’ee karaa irratti akka hantuutaa dhumaa jiru, yaroo diinni keenya saboota olaa hidhachiise karaa maraan uummata keenya lafa irraa dugugaa jiru, yaroo maqaa komandi postiin waraanni Wayyaanee nu irra qubatee ilmaan keenya akka ilmaan bineesaa adamsaa jiru, harka keenya marannee taa’uu hin qabnu. Meeshaa qabnuu fi humna qabnuun of irraa facisuu qabna. Waan goonu adda baafnee yoo barre shimaluu meeshaa dha. OPDOn uummata Oromoo fi TPLF jidduutti bahuu qabdi. Tokko tokkoon keenya ishuma nu bira jirtu jidduu keenyaa baasuu qabna. Haalli uummatni keenya har’a keessa jiru dhabamuu ykn jiraachuu waan taheef qabsoo hadhooftuuf of qopheessuu qabna. Lubbuu qaqqalii kumaatan sorree corofoota OPDOf gumaa isaanii dabrsinee yoo kenine lafeen isaanii qoree tahee nu waraana. Dhiigni isaanii dhangala’ees ibida tahee nu guba.